दोलखामा १ महिला र ४ पुरुष गरी थप ५ जनामा कोरोना सं’क्रमण
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको दुई जनालाई कोरोना सं’क्रमण भएपछि गरिएको कन्ट्रयाक ट्रेसिङब बाट थप ५ जनामा कोरोना सं’क्रमण देखिएको छ । दुई जनाको सम्पर्कमा पुगेका ८३ जनाको स्वाब संकलन गरी धुलिखेल अस्पतालमा परीक्षण गर्दा एक महिला र ४ पुरुष गरी ५ जनामा कोरोना सं’क्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
काठमाडौंमा परीक्षण गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष र धुलिखेल अस्पतालमा परीक्षण गरिएको उपाध्यक्षलाई भने सं’क्रमण नदेखिएको बताईएको छ । गाउँपालिकाका तीन सवारी चालकमध्ये एकजनामा कोरोना सं’क्रमण देखिएको बताईएको छ ।
गाउँपालिकाका कर्मचारी २ जना, स्थानीय एकजना, गाउँपालिकाका सहयोगी सेवाप्रदायक संस्थाका एकजनालाई सं’क्रमण भएको जनाईएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आएर क्वारेन्टाइनमा रहेका एक र गाउँपालिकाका एक कर्मचारी गरी दुई पुरुषमा मंगलबार कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
तेस्रो मुलुकबाट आएका ति सं’क्रमित क्वारेन्टाइनमै रहेको र कर्मचारी पनि गाउँपालिकाको आवासमै आईसोलेसनमा रहेको बताईएको छ । यसअघि पनि सोही गाउँपालिकाकै दुईजनमा कोरोना सं’क्रमण देखिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा आज थप ११९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा उपत्यकामा थप ११९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
काठमाडौंका ८३ जना, भक्तपुरका ६ जना र ललितपुरका ३० जना गरी कुल ११९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए । बुधबार १३८ जना र बिहीबार १२७ जनामा कोरोना भाइरस सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
त्यस्तै, नेपालमा आज थप ५ सय ९४ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ सं’क्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा ५ सय ९४ सं’क्रमित थपिएसंगै नेपालमा सं’क्रमितको कुल संख्या २५ हजार ५ सय ५१ पुगेको छ ।
नेपालमा अहिले सात हजार ९१३ संक्रिय सं’क्रमित रहेका छन् । अहिले क्वारेन्टाइनमा १४ हजार ६३८ रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा २४० डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै नेपालमा १७ हजार ७७ जनाले कोरोना जितेको छन्।